Yaa Wada Ololaha la doonayo in lagu rido Raiisul Wasaare Khayre,? – Hornafrik Media Network
Hornafrik oo tan iyo markii uu soo shaac baxay Olole la doonayo in lagu rido Raiisul Wasaare Khayre waday baaritaano ku aadan cidda ka dambaysay Ololahaan ayaa ogaatay in Buuqan Siyaasadeed ee soo cusboonaaday uu hor boodayo Xasan Sh oo ka maamulaya Daaha Gadaashiisa. Waxayna wararku intaasu ku darayaan in Madaxwaynihii hore ee Somalia, Xasan Sh oo looga guulaystay Doorashadii February uu diyaarinayo Istaraatijiyad la doonayo in lagu hor istaago Madaxwayne Farmaajo inuu dhamaysto 4 ta Sanno ee Sharcigu u oggol yahay.
Xasan Sh Maxamuud oo dhawaan kula kulmay Turky xubno ka socday Xisbiga Daljir ayeey dood dheer kadib waxay isla garteen in la rido Raiisul Wasaare Khayre oo ay sheegeen inuu yahay Shaqsi aan matali karin Hawiye oo uu keensaday Farmaajo. Waxayna isku dhaarsadeen in afka ciidda loo darro Xukuumadda uu hogaamiyo Khayre.
Riditaanka Khayre Kadib
Xubnahan isku tagay ayaa marka ay ridaan Khayre kadib waxay noqonayaan Awood Muuqata oo ka dhex jirta Baarlamaanka Somalia. Waxayna kadib la gali doonaan Gorgortan Siyaasadeed Madaxwayne Farmaajo oo ku qasbanaan doona inuu qanciyo si Dawladdu u sii shaqayso. kadibna Kooxdan waxay doonayaan inay ku qasbaan Farmaajo inay u yeeriyaan qofka noqonaya Raíisul Wasaaaraha Somalia.
Ajandaha 2-aad ee Kooxdan ayaa ah in marka ay keensadaan Raiisul Wasaaraha ay soo dhisaan Xukuumad Wadaag ah oo ay u badnaan doonaan Daljir iyo Damul Jadiid. Waxaana ay durba billaabi doonaan inay Awoodda kala wareegaan Madaxwayne Farmaajo oo ay rabaan inay ku qasbaan inuu ahaa Madaxwayne Maqaar Saar ah 3 Sanno ee soo socota, haddii kale ay isaga laftigiisa Mooshin ka keenayaan.
Kooxaha Daljir iyo Damul Jadiid waxay hadda u muuqdaan inay doonayaan inay dib isaga jafaan Boorka, isla markaana muujiyaan Saamayntooda Siyaasadeed. Waxayse ku xirnaan doontaa Saamayntooda haddii ay u suuragasho Qorshaha ay ku doonayaan inay ku ridaan Raiisul Wasaare Khayre.
Khayre ayaa isna dhiniciisa wada Dadaalo uu ku doonayo inuu abaabulkan uga hortago.